११:५८ बाट बृहस्पति अस्त : के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? « Image Khabar
४ माघ २०७७, आईतवार १२:२६
काठमाडौं । ज्योतिषशास्त्र अनुसार आइतबारबाट बृहस्पति अस्त भएको छ । आइतबार मध्यान्ह ११ बजेर ५८ मिनेटदेखि अस्त भएको बृहस्पति फागुन २ गते दिउँसो १२ बजेर ४२ मिनेटमामा मात्र उदाउने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
ज्योतिष शास्त्रको नियम अनुसार बृहस्पति अस्त हुँदा माङगलिक कार्यहरू गर्न नहुने मान्यता छ । बृहस्पतिलाई शुभको ग्रह मानिने भएकाले अस्त भएको समयमा गरेका कार्यहरूको फल नपाइने ज्योतिषी डा. सुनील सिटौलाले बताउनुभयो । बृहस्पति अस्त हुँदा पहिलो पटक तीर्थयात्रा, देव यात्रा एवं धार्मिक कार्यहरू गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, प्रथम उपाकर्म, ब्रतवन्ध, उत्सर्ग कर्म, पवित्र दान, सर्पबली कर्म, विशेष उत्सव, सीमा स्तम्भहरूको स्थापना, मेला महोत्सव एवं उत्सव, सपथग्रहण साथै अन्य देव तथा पुण्यकार्य गर्न नहुने ज्योतिषी डा. सिटौला बताउनुहन्छ । राम्रो काम गरे पनि फल नपाइने भएकाले यस्ता कामहरू नगर्न ज्योतिषी सिटौलाको सुझाव छ ।
यस्तै बृहस्पति अस्त हुँदा नियमित कार्यहरु भने गर्न हुने ज्योतिष डा. सिटौला बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बृहस्पति अस्त भएको समयमा आफ्ना नियमित नित्यकर्मका साथै एकोद्दिष्ट श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, जन्मोत्सव पूजा, पहिले नै संकल्प गरेका बार एवं तिथीमा लिइने ब्रतहरू गर्न शास्त्रले निषेध गरेकाे छैन । पितृ कार्यहरु, ग्रह शान्ति, ग्रहणदान एवं स्नान, अन्नप्रासन, नामाकरण लगायतका कार्यहरु गर्न कुनै बाधा नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अस्तदेव कार्यपितृृ कार्यबृहस्पति ग्रहमांगलिक कार्य